Xbox Series X uye Series S inounza shanduko dzakakura mukuchengetedza sisitimu, kutora tsika yakasimba-nyika madhiraivha (SSDs) pasi pehodhi. Microsoft yakaisa iyi yekumhanya-mhanya kuchengetedza seyakakosha kune inotevera-chizvarwa mutambo, ichibatsira kuburitsa ipfupi nguva yekuremerwa nerutsigiro rwenyika dzakaoma dzemitambo. Ichi chinodiwa cheSSD chinovimbisa zvakanakisa kubva kune ichangoburwa Xbox consoles asi inogona kuita kuti kuwedzeredzwa kwekuchengetedza kuve kwakaoma. Iwe zvino une mashoma sarudzo paunowedzera nzvimbo kune yako Xbox Series X uye Xbox Series S kupesana neXbox One, uye zvakakosha kuti unzwisise kuti ndeipi inoshanda zvakanyanya kwauri.
Kuwedzera Xbox Series X, Series S kuchengetedza: Zvinhu zvinokosha
Xbox Series X uye Xbox akateedzana s rongedza zvakafanana SSD kuchengetedza, kuunza kusvika makumi mana nguva kumhanya kunowedzera pamusoro pevakuru Xbox One consoles. Microsoft yakasarudza mhinduro yetsika yakavakirwa paNVMe SSD matekinoroji, kuendesa yakanakisa-mu-kirasi kuverenga nekunyora kumhanya, kunyangwe zvichidhura zvichienzaniswa neanononoka hard drive kubva kuXbox One era.
Iyo Xbox Series X ngarava ine 1TB yemukati SSD drive, nepo Xbox Series S inoratidzira yakaderedzwa 512GB kugona kunze kwebhokisi. Muchokwadi, Xbox Series X inongori 802GB yenzvimbo inoshandiswa kumitambo, neXbox Series S inopa 364GB chete. Nekuburitswa kutsva kubva kumafranchise seKudanwa kweDuty, Halo, uye NBA 2K ikozvino kupfuura 100GB, zviri nyore kupfuura nakare kose kuwedzera iyo inosanganisirwa chengetedzo.
Kana raibhurari yako yemitambo inozozadza dhiraivha yemukati, Microsoft inopa nzira mbiri dzekutanga dzekuwedzera chengetedzo yako iripo paXbox Series X uye Series S. Iwo maviri ekuwedzera ekuchengetedza ese ari maviri mhinduro dzekutamba nekuchengetedza Xbox mitambo, kunyangwe iyo yakanyanya kusiyana pakati pevashandisi, nemitambo yavanosarudza.
The Xbox Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi yeXbox Series X|S ndiyo yakanakisa yekuchengetedza sarudzo kune vakawanda, yakagadzirirwa kupa iyo isina musono yekuwedzera yeXbox yako koni. Iyo compact memory kadhi-maitiro SSD yakada kufanana neyemukati SSD mukuita uye basa. Kunyange zvichidhura zvichienzaniswa nedzimwe nzira, haina kunetseka uye inotsigira ese Xbox mitambo.
Unogonawo kusarudza a USB yekunze dhiraivha, kusarudza pakati pehuwandu hwakawanda hwechitatu-bato sarudzo pamitengo yemakwikwi. Madhiraivha ekunze ekunze anoramba achidhura zvakanyanya, aine nyore plug-uye-kutamba rutsigiro senge Xbox One consoles. Nekudaro, madhiraivha e USB anouya neasingakwanisi uye haatsigire ese anotevera-gen Xbox mitambo.
Muchidimbu, kukura rondedzero yeXbox Series X uye Series S Yakagadziridzwa mitambo inoda yakakwirira-kumhanya kuchengetedza, uye chete Microsoft's tsika SSDs inogona kuunza. Kupfuura iyo yemukati SSD inosanganisirwa neXbox Series X uye Series S, iyo yepamutemo Xbox Storage Kuwedzera Kadhi ndiyo yega inosimudzira isina musono.
Nepo madhiraivha e USB achishanda zvakanaka, anongochengeta iyo mitambo, uye uchafanirwa kuiendesa kuSSD kuti itambe. Nekudaro, mazita ekudzokera kumashure-anoenderana, anosanganisira Xbox One, Xbox 360, uye yepakutanga Xbox mitambo, inoshanda zvakanaka pamadhiraivha e USB. Heano kuparara kunobatsira kwekuti madhiraivha e USB anofananidzwa sei nekadhi rekuwedzera reSSD.
Seagate Kuwedzera Kadhi
USB yekunze dhiraivha
Xbox Series X / S mitambo ✓ ✓ Kuchengetedza chete
Xbox Imwe mitambo (yakakwidziridzwa) ✓ ✓ Kuchengetedza chete
Xbox Imwe mitambo (haina kukwidziridzwa) ✓ ✓ ✓
Xbox 360 mitambo ✓ ✓ ✓
Yekutanga Xbox mitambo ✓ ✓ ✓
Matambudziko akatenderedza nzvimbo yekuchengetera anongokura yeXbox Series X uye Series S, ine mazita epamusoro akakura kupfuura nakare kose. Iwo achangoburwa blockbusters anoda kumwe kuchengetwa, nekuwedzera kwakawedzera kugona kweazvino consoles haafanire kudzosera maitiro aya. Nepo Microsoft ichiti mazita eXbox Series S dzimwe nguva anofanirwa kuvharika mudiki pane Xbox Series X, kuchengetedza kuri kure nekuwanda pane chero mudziyo.
Seagate Kuchengeta Kuwedzera Kadhi yeXbox Series X | S
Iine Xbox Series X uye Series S yakatarisana nekuunza inotevera-gen zviitiko, mitambo yakagadzirirwa iyo consoles inoda yakazara bandwidth yetsika yavo SSD matekinoroji. Chinyakare USB ekunze madhiraivha haarove mucherechedzo, iyo yakaona Microsoft neSeagate vachibika tsika "Kuchengeta Kuwedzera Kadhi." Muchidimbu, ndeyemuridzi, yakakwira-kumhanya SSD iyo yakavimbiswa kuzadzisa zviyero zveXbox Series X uye Series S.
Xbox Kuwedzera Kadhi inoita kuti ive nyore, nemasaizi matatu anowanikwa muna 2022. Seagate Storage Expansion Cards anowanikwa mu512GB, 1TB, uye 2TB flavour, nemitengo inoenderana nekwavanokwanisa. Nepo Microsoft yakakurukurawo nezvekuchengetedza kubva kune vamwe vagadziri, iyo irikuenderera nguva yekusarudzika neSeagate zvinoreva kuti isu tichiri kuona izvo zvave kuitika.
Kunyange zvisingarambiki chiri chishandiso cheprimiyamu, imhaka yekubuda ropa-kumucheto hardware mukati, inowira mukuwirirana neyedu. zvakafanotaurwa kare yakapihwa avhareji yemitengo yezvino PCIe 4.0 SSDs. Iyo kadhi inovimbisa zvakanakisa mukati nekunze kuchengetedza, kunyangwe nemutengo wakakwira pane inononoka USB madhiraivha.
Xbox Series X, Series S Seagate Kuwedzera Kadhi: Mutengo uye saizi
The Seagate Kuchengeta Kuwedzera Kadhi yeXbox Series X | S inovavarira kuunza yakanakisa inogoneka mutambo wemitambo, inoenderana chaizvo neMicrosoft yakabikwa-mumhinduro. Iwo makadhi anounza yakanakisa-mu-kirasi tekinoroji pasina kukanganisa zviri nyore uye unozofanirwa kubhadhara kune iyo yakasarudzika.
Iyo Xbox Storage Kuwedzera Kadhi, sezvaitarisirwa, inodhura kupfuura yako yemazuva ese hard drive. Mitengo inotanga pa $139.99 yekupinda-level 512GB modhi, nepo 1TB uye 2TB shanduro inodhura $219.99 uye $399.99, zvichiteerana.
Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi yeXbox Series X|S (512 GB)
Seagate's yekupinda-level Xbox Storage Kuwedzera pamusoro pekaviri inowanikwa nzvimbo yeXbox Series S inonyaradza, uku ichiwedzera inopfuura 50% imwe nzvimbo kuMicrosoft Xbox Series X. Iyi bhajeti-inoshamwaridzika yekuwedzera inoreva nzvimbo yemimwe mitambo mishoma.
$ 139 paWalmart
$ 140 paMicrosoft
Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi yeXbox Series X|S (1 TB)
Uku kuwedzera kwe1TB kwakatangwa tandem neXbox Series X, inonyatso kunyatsoenderana nemukati hard drive, kana katatu izvo zviripo zveXbox Series S. Yakanakira nzvimbo yepakati kune vakawanda, inotora miunganidzwa mikuru yemitambo kana Xbox Game Pass aficionados.
$ 220 paMicrosoft
$ 215 ku Amazon
$ 220 paWalmart
Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi yeXbox Series X|S (2 TB)
Iyo yazvino uye yakakura yekuwedzera Kadhi wachi mu2TB, uye kune vakawanda, inopa yakakwana pamusoro pemamwe akawanda emamwe mazita. Kunyange iwo mutengo wakakwira ungave wakaoma kururamisa, ndeye-yekumira-yekuchengetera shamwari yakarongerwa makore gumi anotevera emitambo yeXbox.
$ 400 ku Amazon
$ 400 pa Best Buy
$ 400 paMicrosoft
USB ekunze hard drives eXbox Series X|S
Kusiyana neXbox Kuwedzera Kadhi, kusarudza yekunze USB drive kunovhura sarudzo dzako kumusika unokwikwidza wemidziyo yechitatu-bato. Kunyange yakaderera kune yeMicrosoft inotsvedza SSDs pane yakatarwa pepa, iwo anonyanya kutenga, asi achiri kurerutsa mutoro pane yako yemukati yekuchengetedza.
Xbox One, Xbox 360, uye ekutanga Xbox mazita ese anomhanya pane yekunze USB hard drive ine Xbox Series X uye Series S. Uye yakapihwa yapfuura-chizvarwa software isingagamuchire Xbox Series-yakagadzirirwa kukwidziridzwa, zvakare inomhanya pa USB chengetedzo.
Asi kushushikana, Xbox Series X uye Series S mazita haazomhanye pamadhiraivha ekunze nekuda kwekunonoka kutamisa kumhanya, kutadza kuzadzisa zvinodiwa zvechizvarwa chinotevera. Iyo yemukati SSD kana yekunze kadhi yekuwedzera inodiwa pakuburitswa kuri kuuya kana mitambo yechikuru yakagadziridzwa yechizvarwa chazvino.
Asi nemutengo wakakwira weiyo SSD yekuwedzera kadhi, zvakakodzera kusimbisa kuti ese Xbox Series X uye Series S mazita anogona kuburitswa kune yekunze USB hard drive. Nepo mamwe mazita anogona kunge asingatambwe kubva kunononoka kuchengetedza, zvichiri kugona kushandura data pakati peSSD uko mitambo yako inogona kutamba uye USB yekuchengetedza. Yako USB hard drive yekufambisa yekumhanyisa inozoona kuti vanomhanya sei vachidzokera nekudzoka, asi inzira inobatsira yekutenderera mitambo kubva mukati meSSD nekudyara kukuru.
Yakanakisa Xbox Series X, Series S ekunze hard drive
Kana iyo SSD Kuwedzera Kadhi isiri yako, inoyevedza ecosystem ye USB-yakabatana hard drive inosangana nezvinodiwa zveXbox One, Xbox 360, uye yekutanga Xbox mazita. Aya magadziriso ekuchengetedza ese anoshanda neXbox Series X uye Series S nhasi, achiwedzera kugona kwekoni yako, pasina kukuvadza chikwama.
Microsoft inotsigira dzinenge dzese Xbox One accessories neXbox Series X uye Series S, ichienda kune iripo yekuchengetedza ecosystem. Izvo zvinovimbisa kuenderana kwechikamu chekunze hard drives kubva kuXbox One era, kana iwe uchida kushandisa zvakare dhiraivha iripo.
Kana uri kutsvaga kutenga, the akanakisa Xbox Series X hard drives tanga zvakachipa semutambo wevhidhiyo, uchipa kuchengetedza kwakavimbika mukati mekuita zvinodiwa pazasi pemadhora makumi mashanu. Kuti 50TB yekuwedzera inogona kupeta nekatatu kamuri yako pane mamwe maconsoles seXbox Series S. Takakurudzira iyo Toshiba Canvio Basics kubva payakatangwa, ichigara ichipa yakanakisa-mutengo we1TB drive, kuwana mamwe magigabytes emadhora ako.
Toshiba Canvio Basics Inotakurika Kunze Hard Drive — 1TB
$ 48 ku Amazon
$ 49 paWalmart
Kuwedzera chengetedzo yako yeXbox haidi kudhura, uye iyi 1TB hard drive ndiyo imwe yesarudzo dzakachipa kunze uko. Inoita kutsigira Xbox One mitambo uye yekare kumashure-inoenderana mazita, ukuwo yakanakira kurodha Xbox Series X/S mitambo.
Iwe unogona zvakare kuenda wakakura kana kuenda kumba neiyi 4TB behemoth kubva kuWestern Digital, ichipa nzvimbo yekuunganidza yako yakazara mitambo yeavhareji mushandisi. Inopa zvakapetwa kana kugona kwemukati iyo inotakura neXbox Series X, zvichiratidza yakakosha pikicha nhasi uye zvese zvauchazoda seanotevera-chizvarwa sidekick. Nepo maSSD achidhura zvakanyanya mumasaizi aya, anononoka madhiraivha anoramba achikwanisika izvozvi. Izvi zvinokurudzirwa kune avo vane hukuru hwemaraibhurari emitambo, kana avo vanoda kuongorora masevhisi seXbox Game Pass.
WD Elements Inotakurika Kunze Hard Drive - 4TB
Iyi 4TB Western Digital inotakurika dhiraivha ndiyo chete yaunoda, ichirova yepamusoro yepamusoro yeayo USB-powered madhiraivha. Kumhanya kunotyisa uye nzvimbo yemitambo yakawanda inoita kuti izvi zvive zvakanaka kune chero anogara achitamba.
$ 90 ku Amazon
$ 129 paWalmart
Kusarudzira SSD kunosimudzira kuverenga kwako nekunyora kumhanya pamusoro pechinyakare hard drive, kucheka nguva dzemutoro pamazita ako aunofarira paXbox One consoles. Uye kunyange zvakadaro akanakisa ekunze SSDs eXbox Series X uye Series S usaenderane Kadhi Rekuwedzera, richiri kurambidzwa kubva kune inotevera-gen mazita, iyo boost ichiri kuuya inobatsira yekudzokera kumashure kana kukurumidza kuendesa kune yako yemukati dhiraivha.
Samsung T7 Inotakurika SSD 500GB
Samsung's T7 500GB yekunze drive inorongedza pamusoro-tier kumhanya pazasi $100. Uri kuwana kuwedzera kwe50% mukuwanda neXbox Series X uku uchipfuura zvakapetwa Xbox Series S. Kumhanya ikoko hakuenderane nezviri mukati chero nyaradzo, asi ichiri kuvandudzwa kwakakura pane mamwe madhiraivha e USB. Yakavharirwa mune inomisa-inodzivirira simbi kupera, inokwana zvakadzika padivi pechero console.
$ 78 ku Amazon $ 78 pa Best Buy
Seagate Kuwedzera Kadhi vs. USB: Ndeipi yako?
Xbox Series X neSeries S ese ari maviri anoratidza yakatsaurirwa kuchengetedza yekuwedzera chiteshi kuti igare Seagate's yepamutemo SSD yekuwedzera kadhi.
Kana yako Xbox Series X kana Series S yadzikira pakuchengetedza, sarudzo yako yekuwedzera inotsamira pakuda kuisa mari muSeagate Storage Yekuwedzera Kadhi yeXbox. Nekukurumidza kuchengetedza kwakakosha kune mazita akagadzirirwa chizvarwa chinotevera, iyi yekunze SSD inopa isina musono mhinduro pamutengo wepamusoro. Mutengo unogona kutadzisa vamwe asi unoratidza chokwadi chehardware, kusunda zvakanakisa kubva kune chero koni.
Ipo Microsoft yakatanga kuburitsa Kadhi Yayo Yekuwedzera Yekuchengetedza nemodhi imwe chete ye1TB kubva kuSeagate, tave kuona humwe hunyanzvi huri kurova musika, huchitora mapoinzi akasiyana siyana. Mitengo ikozvino inotanga pamadhora zana nemakumi mana eiyo yekupinda-chikamu 140GB modhi, nepo avo vane miunganidzwa mikuru yemitambo vanogona kudyara zvakanyanya ne512TB uye 1TB akasiyana.
USB ekunze madhiraivha anogona kuburitsa mamwe magigabytes edhora rako, asi mashandiro anounzwa nemukuru Xbox Ekuwedzera Makadhi anobatsira kururamisa mutengo. Inogona kunge iri kudyara kwakakosha, asi nemakore eXbox Series X uye Series S mitambo irikumberi, ishamwari yakasimba yechizvarwa chazvino chekunyaradza. Iyo inopa iyo yakanyanya musono yekuwedzera yeiyo console yemukati SSD, kudzivirira marwadzo ekuvhara mitambo pakati pemadhiraivha pane yakajairwa.
Kuisa mari mu USB yekunze hard drive kungave kwakakodzera kana uchitsvaga imwe inokwanisika imwe nzira, kunyanya munguva pfupi. Kubatanidza USB midziyo inzira iri nyore yekuchengetedza mitambo yako, kunyangwe iyo isingaite ichireva kuti haugone kutamba usina kuiendesa kune yako yemukati SSD. Iyo inochengetedza kurodhazve mazita, chero iwe uchifara kutenderera iwo nekudzoka.
Maitiro ekushandisa ekunze madhiraivha neXbox
Mushure mekusarudza yako yaunofarira kuchengetedza mhinduro, inguva yekumisikidza uye kuishandisa neXbox yako console. Nepo nzira yeKuwedzera Kadhi uye USB madhiraivha akasiyana, ese ari nyore kubatanidza uye kugadzirisa mune imwe nyaya yemasekonzi. Iyo yakapfava plug-uye-kutamba tsigiro inoreva kuti haufanirwe kuita zvakawanda mushure mekubatanidza madhiraivha mumadoko avo.
Maitiro ekushandisa iyo Xbox Seagate SSD Yekuwedzera Kadhi
Iyo Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi inobatanidza kuXbox Series X uye Series S kuburikidza yakatsaurirwa, yemuridzi yekubatanidza kuseri kwekoni. Iyo rectangular port inogara padhuze neHDMI inobuda pane ese maconsoles, akanyorwa ne "STORAGE EXPANSION." Ivo vanouya mune yakakura zvishoma pane yako avhareji USB thumb drive, ine inotsvedza yepurasitiki chivharo chekuchengetedza. Pakubvisa chivharo chakasanganisirwa, iyo SSD inotsvedza ichipinda muchiteshi, ichibuda zvishoma kubva kumashure I / O pani.
Microsoft inobvumirawo ekunze makadhi eSSD kuti aiswe nekoni yakabatidzwa, ichigonesa avo vane makadhi ekuwedzera akawanda kuti vashandure-inopisa panhunzi. Kana yaiswa, iyo Xbox Series X kana Series S inozoziva yega uye kugadzirisa yako yekunze yekuchengetedza.
Bvisai sleeve yekudzivirira inosanganisirwa neXbox Storage Kuwedzera Kadhi.
Isa Kadhi Rekuwedzera mu Storage Expansion port.
Dzvanya zvakasimba iyo Kadhi Rekuwedzera kusvikira yaburitsa kudzvanya kwakasiyana. Yako Xbox console inozoona nekugadzirisa iyo Xbox Storage Kuwedzera Kadhi, pamwe chete ne-on-screen ziviso.
Kana yangogadzirirwa kushanda neXbox Series X yako kana Series S koni, iyo Xbox Storage Kuwedzera Kadhi ichawedzera huwandu hwayo padziva rako rekuchengetera Xbox. Nekudaro, chikamu chidiki chekuchengetedza chichachengeterwa sisitimu. Semuyenzaniso, iyo 1TB Kuchengeta Kuwedzera Kadhi zvirokwazvo inowedzera 920GB, iine yakatenderedza 100GB yakavharirwa pasi kunze kwebhokisi. Kutevera kuseta, unogona kukopa, kufambisa, uye kuisa zvirimo pakati peiyo SSD yemukati uye yekunze Kuchengeta Kuwedzera Kadhi.
Maitiro ekushandisa USB yekunze drive neXbox Series X, Series S
Mazhinji emazuva ano ekunze madhiraivha anoshanda paXbox Series X uye Series S anonyaradza, achiwedzera kugona kwako kwemitambo, ine inomhanyisa nguva yekuremerwa inowanikwa kuburikidza neanoenderana SSDs. Iwe unozoda USB 3.0 yekunze dhiraivha kuti isangane nezvinodiwa, kuve nechokwadi chepamusoro data kutamisa mitengo yekumhanyisa kumashure-inoenderana mitambo pamusoro pe USB yekubatanidza. Madhiraivha anowirirana anofanirwawo kunge aine 256GB yekuchengetedza, kunyangwe isu tichikurudzira kutenga ingangoita 1TB yerunyararo rwepfungwa mune ramangwana. Usakanganwa kuti akanakisa Xbox One hard drives uye SSDs zvakare inoenderana neatsva Xbox consoles kana iwe uchangobva kuvandudza.
Batanidza zvinodiwa USB wire kune yako yekunze dhiraivha.
Isa tambo ye USB mu USB chengarava pane yako Xbox console. Yako Xbox koni inozoona nekugadzirisa yekunze drive, yakasanganiswa ne-on-screen ziviso.
Fomata iro rakaoma dhiraivha kuchengeta mitambo, kana ikakurudzirwa.
Iyo Xbox Series X uye Series S inoratidzira USB-A ports, zvichiita kuti zvive zvakakosha kutarisa kana yekunze hard drive inoshandisa iyo yekubatanidza yekubatanidza kune iyo console. Izvo zvakanyanya kukosha neazvino maSSD, anowanzo shandisa USB-C majoini kuti uwane iyo yepamusoro inogoneka yekumhanyisa kumhanya. Iwo maviri consoles anoratidza mapatya-akatarisana ne USB-A ports, akanakira kuhwanda ekunze madhiraivha akaomarara uchisunungura chiteshi chemberi.
Iwe zvakare unozofanirwa kubvumidza koni yako kuti ifomate dhiraivha, ichirasikirwa nedata rese rakachengetwa parizvino. Zvakakosha kuti chengetedza CHESE mafaera akachengetwa kudzivirira kurasikirwa nemagwaro aripo uye data. Yako Xbox koni inozoona otomatiki chengetedzo kana ichibatanidza USB yekunze dhiraivha, ine pa-skrini yekukurudzira kurerutsa maitiro ekuseta.
Iyi yekunze hard drive inogona kushandiswa kuchengeta Xbox Series X | S mitambo, kunyangwe iwe uchizofanira kuiendesa kune yemukati SSD, kana yepamutemo Xbox Kuchengeta Kuwedzera Kadhi, kana yave nguva yekutamba. Nekudaro, yekare Xbox One, Xbox 360, uye yekutanga Xbox mitambo ichiri kushanda seyakajairika neaya madhiraivha e USB.
Wedzera yako Xbox Series X | S neaya akanakisa madhiraivha akaomarara
Unofanira kutenga iyo Xbox Series X Seagate Kuwedzera Kadhi?
Yakanakisa yekunze hard drive yeXbox One: Iwo akanyanya kuomesa akaomarara eXbox One X uye Xbox One S
Yakanakisa yekunze hard drive yeXX Series X: Iwo epamusoro ekutyaira eXx Series S uye Series X kubva pa £ 65